Arzantina: Ny voina nahazo ny fianakaviana Pomar · Global Voices teny Malagasy
Arzantina: Ny voina nahazo ny fianakaviana Pomar
Voadika ny 01 Oktobra 2018 1:18 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, 简体中文, 繁體中文, Français, বাংলা, English
Tao anatin'ny herinandro vitsy, nitatitra betsaka momba ny fanjavonan'ny fianakaviana Pomar ny fampitam-baovao ao Arzantina. Ny 14 Novambra 2009, nandeha fiara nankany Pergamino, 220 kilometatra miala an'i Buenos Aires i Fernando Pomar, ny vadiny Gabriela Viagrán, ary ny zanany roa vavy Candelaria sy Pilar ary nanjavona rehefa avy nandalo lalana handoavana hetra.
Samy naminavina ny zavatra maro mety nitranga momba ny fanjavonan'ny fianakaviana Pomar ny fampitam-baovao sy ny polisy. Maro tamin'izany no niampanga ilay raim-pianakaviana Fernando Pomar, ho tompon'andraikitra, na namono ny fianakaviany.
Ny 8 Desambra 2009, hita tany akaikin'i Pergamino nivadika teo amin'ny sisin-dalana ny fiaran'izy ireo. Maty avokoa ny tao anatiny , araka ny notaterin'ny gazety El Clarín. Nilaza ny polisy fa niharan'ny lozam-pifamoivoizana ny fianakaviana: nivadika ny fiaran'izy ireo teo am-pihodinan-dalana. Nanakana ny polisy tsy hahita ny fiara mialoha ny bozaka lava nanamorona ny làlana.
Taorian'ny nahitan'ny polisy izany, lohahevitra roa no niteraka adihevitra indrindra tany Arzantina. Ny tsy fahombiazan'ny polisy no voalohany tamin'izany. Tao amin'ny Twitter, maro ireo mpisera aterineto no nilaza ny hevitr'izy ireo momba ny tsy fahombiazan'ny polisy ao Buenos Aires amin'ny famahana ny fanadihadiana teo ambanin'ny tenirohy “#pomar” .
Nanoratra ny mpisera @la_despistada hoe:
Ilay polisy manao ny fanadihadiana ny raharaha Pomar ihany ve no miady amin'ny tsy fandriampahalemana, ary miaro antsika ???. #pomar
Hoy i christian4oux :
ny fahalemena izay tsapako manoloana ny zava-misy fa tena simba sy tsy mahomby ny andrimpanjakana manome antsika “fiarovana” # policía #pomar
Nanoratra ilay bilaogera JSK-SDE fa sarotra ny mino hoe naharitra 24 andro vao hita ny fiara:
Fantatra fa tena be mpandalo ny toerana [ny lalana Pergamino], maro ny trano eny akaikin'io làlana io, dia tsy nisy nahita na naheno na inona na inona ve ? Tsy mampino ahy izany, 24 andro be izao tsy nahitana sy tsy naharenesana na inona na inona.
Ny bilaogy Soy Más de lo Mismo sy Visualmente ihany koa dia nandray anjara tamin'ny adihevitra momba ny tsy fandriampahalemana.
Ny fihetsika nataon'ny fampitam-baovao no lohahevitra iray hafa niadian-kevitra. Naneho ny karazana vinavina rehetra mikasika ny fanjavonan'ny fianakaviana ny fandaharan'ny fahitalavitra sy ny gazety. Tao amin'ny bilaogy Magia Crítica, niresaka momba ny fampitam-baovao izay nanontany ny hevitry ny “mpahita ny hoavy” mba hiresaka ny raharaha i Alejandro Agostinelli:
Nilaza ny parapsykôlôjigy sy ny mpahita ny hoavy fa velona izy ireo. Niresaka momba ny fanjavonana nankany amin'ny tontolo hafa ireo mpikaroka momba ny OVNI. Nanenjika ilay raim-pianakaviana ny manam-pahaizana misahana ny raharahan'ny polisy. Na ny rain'ilay raim-pianakaviana. Fantatra ankehitriny fa maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana ny fianakaviana Pomar.
Nanoratra tao amin'ny Twitter i Daniel Molina:
Nampiseho ny lanjan'ny fahamatoran'ny asa fanaovan-gazety tao Arzantina ny raharaha Pomar: nitantara lainga fotsiny ny fampitam-baovao, tsy nisy fanalefahan-tsazy.
Ahitana vaovao misimisy kokoa momba ny fomba nitantaran'ny fampitam-baovao ny raharaha ny tao amin'ny bilaogy La Puta Pituca sy Los Lanzallamas .
Naleon'ny bilaogy Seguridad Vial nisarika ny saina ho amin'ny lohahevitra iray hafa: mety hanampy amin'ny fanatsarana ny fiarovana ny fifamoivoizana ny voina nitranga.
Antenaina fa tsy ho zava-poana ny fahafatesan'izy ireo ary rehefa voavaha ny raharaha amin'izao fotoana izao – nihatana fiafarana mampalahelo na dia “tsy amidy aza izany” dia tsy hanadino izany isika. Antenaina fa hangataka fiarovana bebe kokoa ho amin'ny fifamoivoizana ireo mpiara-miasa amintsika ao amin'ny gazety mba tsy ho lany fotoana tamin'ny fanoratana sy ny fitenenana betsaka, izay tsy fandaniana andro velively.